नयाँ भाइरस जोखिमका कारण नेपालमा लकडाउन हुनसक्ने ! « Ok Janata Newsportal
नयाँ भाइरस जोखिमका कारण नेपालमा लकडाउन हुनसक्ने !
काठमाडौं । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण मुलुक स्तब्ध छ । कोरोनाले अहिले विश्वलाई नै समस्यामा पारेकोे छ । यसैबीच पुनः नयाँ भाइरसको पुष्टि भएको भन्दै जनतामा त्रास छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर पुसको पहिलो साता बेलायतबाट नेपाल आएकामध्ये तीन जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति भेटिएको जनाएको छ ।
नयाँ प्रजातिको उद्गमस्थल बेलायतबाट आएकामध्ये ६ जनालाई मन्त्रालयले निरानीमा राखेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा नमुनामध्ये ३ वटा नमूना पोजेटिभ र ३ वटा नमूना नेगेटिभ देखिएको हो ।
नयाँ प्रकारको भाइरसको संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउनका लागि उनीहरुको नमूना विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा पुस २७ गते हङकङको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । संक्रमण पुष्टि हुनेमा २८ वर्षीया महिला, ६७ वर्षीय वृद्ध र ३२ वर्षीय पुरुष रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति देखिएसँगै बेलायत र फ्रान्सले लकडाउन गरेका छन् । अहिले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको संक्रमण अमेरिकामा पनि तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । यसबाट बच्नका लागि विश्वका विभिन्न देशहरुले उच्च साबधानी अपनाइरहेका छन् ।
सोमबार नेपालमा नयाँ प्रजातिको संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि संक्रमण नफैलिएला भन्न सक्ने स्थिति नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् । तर सर्वसाधारण भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको प्रयोगलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
धेरैजसोले मास्क लगाउन छोडिसकेका छन् । भिडभाड हुने ठाउँहरुमा सामाजिक दूरी कायम गरिएको देखिँदैन ।
नयाँ प्रजातीको भाइरसका कारण नेपाल पनि उच्च जोखिममा पर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय सडकमा देखिएको जनमासका कारण पनि नयाँ भाइरस संक्रमणको दर उच्च छ ।
बेलैमा सजकता अपनाउन सकिएन भने नयाँ प्रजातीको भाइरस फस्टाउने देखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ । नेपालमा पनि पुनः लकडाउनको सम्भावना रहने उनीहरुले सुझाएका छन् ।
गुडिरहेको एम्बुलेन्समाथि पहिरो खस्यो, एकको मृत्यु
कोरोनाबारे एकाबिहानै चिकित्सकहरुको नयाँ खुलासा